Tsy nahavaha olana hatreto
2010-11-22 @ 10:17 in Andavanandro
Nivadika sahady ny herinandro niainana toe-draharaha mafampana teto amin'ny firenena. Samy manana ny heviny mikasika ny fitsapa-kevi-bahoaka sy ilay lazaina fa fanonganam-panjakana avokoa ny tsirairay. Na izany aza misy ny zavatra tsara resahina ihany.
Fitsapa-kevi-bahoaka tsy misy mahalala izay valiny intsony
Asa noho izaho izay efa nihevitra iny fandatsaham-bato iny ho toy ny tsy misy angamba fa raha mihaino resadresaka ianao dia toy ny tsy misy mahalala intsony izany fitsapa-kevi-bahoaka izany fa takon'ilay fanonganam-panjakana ny raharaha. Na izany aza dia misy ny tsikaritra momba azy io tsy maintsy tantaraina.
Antsirabe tanàna faharoa eto Madagasikara raha ny habetsahan'ny olona no resahina dia tsy maintsy nolazaina tsirairay ny olona ny amin'izay tokony ataony rehefa handatsa-bato. Tsy fantatro aloha fa raha izaho izay olon-dehibe ve no toy ny ampianarina indray tsy lasa tondroina hatramin'ny tokony hosafidiako? Tsikaritry ny mpanao gazety tamin'ny fotoana nandalovany fohy tao amin'ny biraom-pifidianana iray ny fandrovitan'ny mpifidy iray ny vatom-pifidianana ka ilay ampahany misy ny ENY mangamanga no saiky arotsany. Fanamarihana roa avy hatrany, na telo akory aza: (1) toy ny voaramaso avy hatrany ny safidinao ka aleo tsy manao mahasosotra ny mpitondra. (2) Aty an-tanàndehibe aza mbola misy ny tsy mahalala mihitsy izay tokony atao no tsy ampy ny fampianarana tsy mitongilana amin'ny fombafomba atao rehefa anaty biraom-pifidianana ka aiza ho aiza ny any ambanivohitra any moa tsy tonga dia fanerena ankitsirano ny safidy no atao? (3) Fotoana fohy nandalovana dia nahitana zavatra tahaka izany ka aiza ho aiza mandra-pahatapitry ny fotoana tsy ho fihomehezana fotsiny va?
Dia nisy tampoka ny didim-pitondrana nanemotra ny fifidianana ho hatramin'ny enina ora hariva indray raha tamin'ny efatra ora folakandro no voafaritra mialoha. Nolazaina moa fa noho ny fahamaroan'ny mpifidy no nanaovana izany fanemorana izany ary hahafahan'izay tsy afa-nifidy noho ny tsy fananana kara-pifidianana sy tsy tafiditra anaty lisitra mifidy raha mitondra kara-pifidianana taloha na fanamarinam-ponenana sy kara-panondro mifidy. Mifanohitra sahady tamin'ny tanjona napetraka izany fepetra vaovao niova an-tenantenan-dalana izany.
Raha napetraka ny famerana ny ora ho hatramin'ny efatra ora hariva dia ny hialana mba tsy ho amin'ny alina tsy maintsy ampiasana jiro no hanaovana ny fanisam-bato... toy ny mametraka avy hatrany fa misy zavatra maizina katrohina ao ambadika ao. (1) Efa nahazatra nandritra ny fifidianana natao hatramin'izay fa raha tonga ny ora farany nefa mbola misy ny filaharana dia tsy azo rarana tsy hifidy ireo olona milahatra ireo fa tsy maintsy manefa ny adidiny avokoa. Eo izany dia efa tsy mitombina ny antony nanemorana ny fotoana ankoatra ny fitadiavana zavatra hafa mihitsy. (2) Mivadika zavatra hafa tanteraka ny fandehan'ny raharaha rehefa hoe afa-mifidy amin'ny alalan'ny taratasy fanamarinam-ponenana sy ny karinem-pokontany satria antontan-taratasy miankina tanteraka amin'ny fokontany izay toe-javatra izay, manaraka izany satria karazan'ny tsy tokony hisy intsony ilay hoe lisitra fanampiny amin'ny "ordonnance" dia karazan'ny isan'ny olona anaty lisitra ihany no isa apetraka nefa efa avela mifidy indray izay tsy anaty lisitra; fanerena an-kitsirano hampiakarana ny tahan'ny fandraisana anjara izany toy ny milaza fa maro no nifidy kokoa noho ny tsy nifidy tamin'izay voasoratra anarana, izany hoe lasa tsy mikaonty intsony ny fijerena ny tahan'ny fandraisana anjara noho ilay fanapahan-kevitra... nefa tsy nahafitaka ny fiarahamonina iraisam-pirenena izay toe-javatra izay (3) Noterena ho karazan'ny ao anaty aizina avokoa indray ny fanisam-bato rehetra ka tsy maintsy ampiasaina ny jiro. Ny voamarik'ireo nanatrika ny fanisam-bato, indrindra fa tany amin'ny toerana tsy maintsy nampiasana labozia dia ny mpanonona ny vato ihany no nahita izay nomarihin'ny mpifidy ao amin'ny biletà fa ny hafa dia tsy mahita na inona na inona, rehefa stylo no nanaovana ny tanam-bokovoko. Ny hafa rehetra dia mpihaino fotsiny ihany fa tsy tena mahita akory izay marika anaty biletà.
Hatreo ihany no tadidiko eto am-panoratana fa efa bebe ihany no nilaza ny tsy fahatomombanan'iny fitsapa-kevi-bahoaka tsy dia misy manaraka intsony izay valim-pifidianana avy aminy iny na mpanohana fitondrana izy na tsia.
Mbola miady hevitra tamin'izay tena nitranga marina tamin'ity raharahan'ny miaramila ity ny mpitafatafa na andavanandro io na an-tserasera. Ny famintinana amin'ny ankapobeny no mametraka fa (1) ny vola no tena niasa tamin'iny raharaha iny ka nahatonga ny fifampitifirana tsy nahitana naratra na maty teo amin'ny andaniny sy ny ankilany, fa zavatra hafa kosa indray ny any amin'ny fanadhiadiana any. (2) Efa nisy ny fikasana hisambotra manamboninahitra vitsivitsy nialoha ny fifidianana ka heverina fa ry zareo ireto izany kasaina hosamborina izany, dia tsy maintsy niditra tamin'ny dingana manaraka angamba ry zareo na dia mbola teo aza ny fifandirana amin'izay tokony hitarika avy eo raha ny filazan'ny tananews no inoana. (3) tsy hoe rava iny fikomiana iny dia vita hatreo ny raharaha fa mbola hendratra avokoa ny rehetra sady mitaintaina satria tsy niravona hatreo akory ny krizy. (4) Ny fipoahana etsy sy eroa manaitaitra ny olona ka mitety toerana maro dia mety ho endrika tolona hafa indray mety hahery vaika kokoa noho ny teo aloha. Tsy fantatra anefa hatreto hoe iza no tena manao ireny fanaitairana ireny hatreto. Dia atsahatro kely aloha!
Jentilisa 22 novambra 2010 amin'ny 12:19